News - Ascent
View allNews and ViewsPress Releases
Myanmar to return to “business as normal” by Q3 2021, according to experts at Ascent Capital’s inaugural Investor Conference
Press Releases 14/01/2021
2021 expected to see investment growth continue on the back of the increasing pace of notable investments and M&A deals during 2020
၂၀၂၁ ခုနှစ်၏ တတိယပတ်ကာလတွင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေသည် ပုံမှန်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဖြစ်ဟု Ascent Capital မှ ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပသော Investor Conference သို့တက်ရောက်လာသော ပညာရှင်များမှပြောကြား
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင် သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သော အရေးပါသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့် M&A များကြောင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပမာဏတိုးတက်နိုင်မည်
Four Key Areas of Opportunity for Myanmar’s Future
News and Views 12/01/2021
As Myanmar awaits the release of the MERRP, Ascent Capital pinpoints four factors critical to building Myanmar’s economy andabetter future for its people.
Ascent Capital appoints new Managing Partners; aims to accelerate pace of investments in 2021
Press Releases 11/01/2021
Ascent Capital Partners Pte Ltd,aMyanmar-focused private equity firm, further strengthens its team with the appointment of Mr Stanley Kyaw Khaing and Mr Yeo Chee Kian as Managing Partners.
Ascent Capital မှ Managing Partnerသစ်များခန့်အပ် – ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို အရှိန်အဟုန်မြှင့်ဆောင်ရွက်ရန်ရည်မှန်း
မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. သည် Managing Partner အသစ်များဖြစ်သည့် Mr Stanley Kyaw Khaing နှင့် Mr Yeo Chee Kian တို့အား ခန့်အပ်ခဲ့ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။
Myanmar’s Economic Outlook and How PEs and VCs Can Make A Difference
News and Views 08/01/2021
Post-election, as Myanmar recovers from the effects ofasecond pandemic lockdown, we examine the country’s economic prospects and how investors may support its continued development and growth.
Ascent Capital Shows Confidence in Myanmar Economy; Completes Final Close of Largest Myanmar-Focused Fund
Press Releases 11/11/2020
Ascent Capital,aSingapore-registered fund management firm, today announced the final close of its debut Myanmar-focused fund, the Ascent Myanmar Growth Fund I LP. Established in 2018, AMGF has attracted total capital commitments of US$88 million, making it the single largest Myanmar-focused private equity fund.
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအ‌ခြေအနေအပေါ် Ascent Capital အနေဖြင့် အပြည့်အဝ ယုံကြည်မှုရှိကြောင်း ပြသ — မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အကြီးမားဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ အဆင်သင့်ဖြစ်
စင်္ကာပူ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ(၁၁)ရက်၊ – စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) သည် ၎င်း၏ မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF”) မှတဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အဆင်သင့်ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ယနေ့ သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၈ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည့် AMGF သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ (၈၈) သန်းရှိသည့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ အကြီးဆုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေ ဖြစ်ပါသည်။
စင်ကာပူငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့က အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတွင် ကန်ဒေါ်လာ ၂၆သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ
News and Views 25/06/2020
စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းကို အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Frontiir Pte. Ltd. တွင် ရှယ်ယာအနည်းစုအဖြစ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း Ascent Capital ထံမှ သိရသည်။ The Voice (Myanmar) စင်ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထား သည့် ငွေကြေးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (Ascent Capital) က မြန်မာနိုင်ငံ တွင် ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအဖြစ် အမေရိ ကန်ဒေါ်လာ ၂၆ သန်းကို အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Frontiir Pte. Ltd.…
The investment is driven by the fund’s belief that Internet access is an essential service which can improve lives, reduce inequalities and drive economic growth, especially in emerging markets such as Myanmar. The Business Times (Singapore) Lim Chong Chong, founder and managing partner of Ascent Capital, which manages the fund, said that the investment is…
Singapore’s Ascent Invests $26 Million in Frontiir
Ascent Myanmar Growth Fund I LP (AMGF), Myanmar-Focused private equity fund owned by Ascent Capital Partners Pte. Ltd,aSingapore-registered fund management firm, has madeacombined $26 million minority investment in Frontiir Pte. Ltd Myanmar Business Today (Myanmar) Ascent Myanmar Growth Fund I LP (AMGF), Myanmar-Focused private equity fund owned by Ascent Capital Partners…
Singapore fund takes stake in Myanmar ISP Frontiir
News and Views 24/06/2020
“The main investment thesis for Myanmar is significant growth potential over the mid to long term. That growth story remains unchanged,” Mr Lim Chong Chong said. The Myanmar Times (Myanmar) The deal is expected to help Frontiir expand its services to more than half of Myanmar’s states and regions within halfadecade, with the…
Myanmar-focused PE firm Ascent Capital has clocked its first deal in the country, leadinga$26-million minority investment in internet service provider Frontiir Myanmar DealStreetAsia (Singapore) The investment was made through Ascent Myanmar Growth Fund I (AMGF), the firm’s debut fund that has attracted the Asian Development Bank and Singapore’s state investor Temasek as limited…
Ascent Capital မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်းအင်တာနက်၀န်ဆောင်မှု ကုမ္ပဏီဖြစ်သည့် Frontiir ကုမ္ပဏီတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း
Press Releases 24/06/2020
စင်္ကာပူ၊ ၂၀၂၀ပြည့်နှစ်၊ ဇွန်လ(၂၄)ရက်၊ – စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ငွေကြေးစီမံ ခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် Ascent Capital Partners Pte. Ltd. မှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၄င်း၏ ပထမဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကို မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ascent Myanmar Growth Fund I LP မှ တဆင့် ပြုလုပ်ကြောင်း ယနေ့သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါသည်။ AMGF မှ ဦးဆောင်၍ စုစုပေါင်း အမေရိကန်ဒေါ်လာ(၂၆)သန်းကို မြန်မာနိုင်ငံ၏ ထိပ်တန်း အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီ Frontiir Pte. Ltd. တွင် ရှယ်ယာအနည်းစုအနေ ဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါသည်။
Ascent Capital Makes Investment into Frontiir, Leading Internet Service Provider in Myanmar
SINGAPORE, 24 June 2020 – Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”),aSingapore-registered fund management firm, today announced its first investment in Myanmar via its Myanmar-focused private equity fund, Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF”). Managed by Ascent Capital, AMGF will leadacombined US$26 million minority investment in Myanmar’s leading internet service…
News and Views 04/02/2019
We hope to create positive change in Myanmar. We also support the new Myanmar Sustainable Development Plan which is known in the private sector as the main engine for driving balanced and sustainable economic growth. The Irrawaddy (Myanmar) Interview Market Insight The Irrawaddy spoke with founder and managing partner of Ascent Capital Partners Pte. Ltd.,…
News and Views 02/02/2019
Asalong term investor, we are not here to make short-term money. We are here to make long-term returns. And over the long term, if we care about the environmental goals will we be able to grow the business as well as grow the economy. Mizzima (Myanmar) Interview Market Insight Mr Lim Chong Chong,…
နယ်ပယ်စုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့် AMGF အဖွဲ့စတင်ပြီ
News and Views 29/01/2019
အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အအောင်မြင်ဆုံးကုမ္ဗဏီတွေအနက် တစ်ခုဖြစ်ပြီး ဂရန်းရွိုင်ရယ် ဝီစကီ အမှတ်တံဆိပ်ရဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Myanmar Distillery Company (MDC Group) ရဲ့ Kumudra News (Myanmar) Editorial Ascent Capital က နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ အာဆီယံမဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေထည့်ဝင်ရင်းနှီး ထားတဲ့ Ascent Myanmar Growth Fund (AMGF) ကို စတင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းကို ဒီလင့်(ခ်)တွင် နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဆောင်ရွက်မည့် Ascent Myanmar Growth Fund စတင်မိတ်ဆက်
News and Views 24/01/2019
AMGF သည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားသုံးသူနှင့် သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ ဝန်ဆောင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ မီဒီယာနှင့် ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍများက ကုမ္ပဏီများကို အဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်ဖြစ်သည်။ The Myanmar Times (Myanmar) Interview “မြန်မာနိုင်ငံရှိ ကုမ္ပဏီတွေ တိုးတက်အောင်မြင်စေဖို့ AMGF က တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီပေးနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု ဦးအောင်မိုးကျော်က ပြောသည်။ သတင်းကို ဒီလင့်(ခ်)တွင် နှိပ်၍ ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
Ascent Capital launches Myanmar growth fund
News and Views 19/01/2019
One of our key goals is to help build the foundation of Myanmar companies for sustainable growth. Mizzima (Myanmar) Editorial “Considering Myanmar’s growth potential and stage of development, our investment philosophy is to look beyond just providing capital; we will add value to Myanmar companies by contributing our management expertise and by leveraging on our…
Temasek နှင့် ADB က မြန်မာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအတွက် ငွေကြေးပံ့ပိုး
News and Views 17/01/2019
မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားတိုးတက်နိုင်သည့် အကြောင်းရှိပြီး အရာရာသည့် အစောပိုင်းအဆင့်တွင်သာရှိနေသေးသည်။ ထိုအကြောင်းသည်ကပင် ၎င်းတို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံရသည့်အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ဟု ၎င်းကပြောကြားသည်။ Frontier Myanmar (Myanmar) Interview ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား အဓိကထားသည့် ဒုတိယမြောက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေကိုပင် ထူထောင်ရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း ၎င်း၏ယုံကြည်မှုအဆင့်ကို ရည်ညွှန်းရင်း ချုန်းကပြောသည်။ ထို့နောက် ဒေသဆိုင်ရာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေတစ်ရပ်ထူထောင်ရန် စဉ်းစားနိုင်သည်။
Ascent Capital launches Myanmar fund backed by Temasek, ADB
News and Views 16/01/2019
Our investors are all long-term investors who are not overly concerned about these challenges, but are in fact bullish on this country. Business Times (Singapore) Interview Market Insight The Singapore-registered fund management firm, has launched its maiden Myanmar-focused private equity fund that counts Temasek Holdings, the Asian Development Bank (ADB), and Philippines conglomerate JG Summit…
Singapore channels private equity into Myanmar growth sectors
AMGF will deployalong term strategy, with aims to stay invested in its portfolio of selected firms for up to 14 years. The Myanmar Times (Myanmar) Interview Market Insight Ascent Myanmar Growth Fund I (AMGF),aMyanmar-focused fund managed by Ascent Capital, will invest inasignificant minority or majority stake in brown-field firms…
Ascent Capital မှ နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အာဆီယံမဟာဗျူဟာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ ထည့်ဝင်ရင်းနှီးထားသည့် Myanmar Growth Fund ကို စတင်မိတ်ဆက်
Press Releases 15/01/2019
စင်္ကာပူ၊ ဇန်နဝါရီ လ ၁၄ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် – စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”) သည် မြန်မာနိုင်ငံအခြေစိုက် Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF”) ကို စတင်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။ AMGF အနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် စားသုံးသူနှင့်သက်ဆိုင်သောလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ဆောင်မှု၊ ကျန်းမာရေး၊ နည်းပညာ၊ မီဒီယာ၊ နှင့် ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍများမှ ကုမ္ပဏီများကို အဓိကထား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ AMGF ကို ကမ္ဘာတစ်ဝန်း နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု နှင့် စီးပွားရေး လုပ်ဆောင်ရာ၌…
Ascent Capital Launches Myanmar Growth Fund Backed by Global Institutional and ASEAN Strategic Investors
SINGAPORE, 15 January 2019 – Ascent Capital Partners Pte. Ltd. (“Ascent Capital”),aSingapore-registered fund management firm, today announced the launch ofaMyanmar-focused private equity fund – Ascent Myanmar Growth Fund I LP (“AMGF”). AMGF will focus on companies in the consumer, education, financial services, healthcare, technology, media, and telecommunications sectors in the nascent…
Ascent Starts Myanmar Private Equity Firm Backed by Temasek, ADB
News and Views 15/01/2019
Ascent’s fund will look to buy stakes of around 30 percent in companies that are leaders in their industries. Bloomberg (International) Interview Market Insight Ascent Myanmar Growth Fund I has raised more than $50 million and is looking to add one or two more investors to reach $100 million in the coming months, Ascent co-founder…
Temasek and ADB back Myanmar investment fund
Myanmar isagrowth story – everything is at an early stage – and that growth story is our main investment thesis. Frontier Myanmar (Myanmar) Interview Private equity company Ascent Capital has launched Singapore’s first Myanmar-focused fund, with backing from high-profile investors including sovereign wealth fund Temasek and the Asian Development Bank. Read the full…
The underlying investment thesis is about helping the business grow DealStreetAsia (Singapore) Interview The founders also spoke about Ascent Capital’s vision to support the growth of promising Myanmar companies by contributing its expertise and network. In their view, these are critical for Myanmar companies to go to the next level. Read the full story here…